Koonfurta Afrika-siyaasadeed | KONGOLISOLO
Way u qalantaa inaad u dhinto fikradaha aan dhiman. Waxaa jira dad difaacaya oo diyaar u ah inay u dhintaan fikradaha xun iyo kuwa wax dumiya, fikradaha aan bulshada horay u marin, iyo fikradaha aan xitaa macnaha lahayn looma baahna in laga hadlo
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 12, 2020 15: 15 No Comments
Dhanka kale, waxaa jira dad kale oo difaaca, ilaa geerida, fikradaha muhiimka ah, horumarka iyo fikradaha badbaadinta. Fikradaha dhismay, ee kor u qaadaya aadanaha iyo ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: May 30, 2020 00: 20 No Comments
Dooddu way furan tahay! Kumaa loo arkaa maxbuuska ugu weyn adduunka? Maxaa loo xiray ?? Waddankee ayuu ka yimid? Sanadkee ayuu lasii daayay ?? ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: May 2, 2020 00: 00 No Comments
In kasta oo ay ku noolaayeen meelo fog iyo durdurro kaladuwan, haddana go'aannadooda waxaa loo tarjumay isu-soo-bax halgan ah "Sharafta aadanaha": bilowgii, waxay qalbigooda ka hormareen ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug12 07: 12